Liverpool oo garoonkeeda Anfield guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Leicester City… +SAWIRRO – Gool FM
RASMI: Manchester City oo ku dhawaaqday saxiixa Jack Grealish
RASMI: Kooxda Barcelona oo ku dhawaaqday bixitaanka Lionel Messi
RASMI: Kooxda Real Madrid oo soo bandhigtay Maaliyadda ay ku ciyaari doonto marka ay martida tahay xilli ciyaareedka cusub ee 2021/22… + SAWIRRO
LAYAAB: Ronaldo oo Tartankan dhan ciyaaray isagoo xiran Xafaayad, kuna guuleystay Gooldhalintii tartankaasi!!
Kooxaha Juventus iyo PSG oo ku dagaallamaya saxiixa xiddig ka tirsan Manchester United
Kooxda Barcelona oo ku rajo weyn inay maanta ku dhawaaqdo heshiis kordhinta cusub ee Lionel Messi
Jack Grealish oo maanta tijaabada caafimaad u maraya Kooxda Manchester City
Romelu Lukaku oo kaga nixiyay Inter Milan go’aan xiiso leh
Gary Neville oo uga digay Harry Kane mustaqbalkiisa kooxda Tottenham Hotspur
RASMI: Alisson Becker oo heshiis waqti dheer ah u saxiixay kooxda Liverpool
Liverpool oo garoonkeeda Anfield guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Leicester City… +SAWIRRO
Dajiye November 22, 2020
(Liverpool) 23 Nof 2020. Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Leicester City, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0, ciyaar qeyb ka ahayd kulamada Toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa Liverpool.
Daqiiqadii 21-aad Liverpool ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta, kaddib markii uu gool iska dhaliyay daafaca kooxda Leicester City ee Jonny Evans, dheesha ayaana sidaas ku noqotay 1-0.
41 daqiiqo marka ay ciyaarta aheyd Liverpool ayaa dhalisay goolkeeda labaad ee ciyaarta, kaddib markii uu 2-0 ka dhigay xiddiga reer Portugal ee Diogo Jota, waxaana caawinta goolkan lahaa Andrew Robertson.
Daqiiqadii 86-aad kooxda Liverpool ayaa sii dheereysatay hoggaanka ciyaarta kaddib markii uu 3-0 ka dhiga xiddiga reer Brazil ee Roberto Firmino, waxaana goolkan caawiyay James Milner.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo adkaatay 3-0 ay Liverpool kaga adkaatay kooxda Leicester City oo marti ugu aheyd garoonka Anfield, xilli Reds ay soo fariisatay booska labaad ee miiska kala sareynta horyaalka, waxayna min 20 dhibcood leeyihiin kooxda hoggaanka ku fadhisa ee Tottenham Hotspur, balse farqi goolal ah ayaa looga hoggaaminayaa.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Liverpool iyo Leicester City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Diogo Jota oo isku qoray Taariikhda Kooxda Liverpool kaddib goolkii uu xalay ka dhaliyey Leicester City